Lalao sy fampiharana 8 maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (26 Desambra) | Vaovao IPhone
Mandresy ny fialantsasatra amin'ny alin'ny Noely sy amin'ny Andro Noely, miverina miaraka amina andiany vaovao aho lalao sy rindranasa izay, na dia karama matetika aza izy ireo, androany dia afaka jerenao ao amin'ny App Store maimaimpoana.
Tsarovy fa ireo fampiroboroboana ireo dia Fotoana voafetra ary tsy fantatsika hoe mandra-pahoviana izy ireo no hihatra. Ny hany tokana azontsika antoka dia ny fihenan'ny fihenam-bidy amin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity, ka ny zavatra tsara indrindra dia ny maika ny hihazona ireo lalao sy fampiharana izay mahaliana anao indrindra, ary rehefa afaka izany dia hanana fotoana ianao hanombatombanana azy ireo.
1 Baldify - Mandehana sola
4 Biby goavambe A To Z: mianatra abidy ho an'ny kindergarten HD
5 Blox 3D Mpamorona izao tontolo izao
6 Blox 3D City Mpamorona
7 Anim8: 3D Character Animation Made Easy
Baldify - Mandehana sola
Baldify - Mandehana sola dia fampiharana tsy dia ampiasaina firy, saingy mety ho izany tena mampihomehy amin'ny fivorian'ny fianakaviana sy ny namana mahazatra toy izany amin'ireo daty ireo. Ary raha dinihina fa izao dia azonao atao maimaim-poana izany dia tsy misy very. amin'ny Baldify afaka "tunearte" ianao ho lehilahy sola be volombava ary maro hafa.
Ny vidiny mahazatra dia 0,99 euro, kanefa izao dia azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Baldify - Mandehana sola€ 1,09
République malaza sy malaza lalao mifototra amin'ny ankamantatra sy paikady izay hampifaly anao mandritra ny ora maro sy ora maro ary ora maro.
Ao amin'ny "Episode 5: Terminus", ny fizarana fahadimy sy farany an'ny sanganasan'ny République saga, voafaritra ny lafiny. Hope sy ilay mpilalao dia mandray ny tolona ho an'ny fahalalahana mivantana any amin'ny Omniscient, noho izany dia tsy maintsy misafidy tsara ny fanohanany izy ireo, mba tsy ho tratran'ny tsy rariny izy ireo tadiaviny.
Ny vidiny mahazatra dia 2,99 euro, kanefa izao dia azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
«Blox 3D dia a fomba mahafinaritra sy mora hianarin'ny ankizy modely 3D. Mamorona zavatra sarobidy amin'ny fomba tsotra sy mora ampiasaina amin'ny alàlan'ny fanalahidy sy paompy indroa hamafana. Ampio zavatra an-tsary toy ny paingotra, paingotra ary kodiarana mba hahavelona azy ireo. Blox 3D dia natao hampivelarana ny fahaiza-mamorona sy ny fahitana ny zaza.
Blox 3D€ 3,49
Biby goavambe A To Z: mianatra abidy ho an'ny kindergarten HD
A hatramin'ny Z Monsters fampiharana izany - lalao izany mampianatra ny ankizy ny abidia amin'ny alàlan'ny "biby goavam-be".
Jereo ny andiam-biby goavam-be mampianatra anao ny abidia! Ny dingana voalohany dia ny hanafaka azy ireo ary hijery azy ireo ho lasa adala. Sambany izy ireo avy eo. Ireto biby goavam-be ireto dia mahafinaritra sy mampiala voly, mitazona ny tanora mianatra handray anjara sy liana amin'ny fianarana abidia. Vonona ny hihaona amin'Andriamatoa Clone, Andriamatoa Angry, Andriamatoa Baomba ary biby goavambe 23 hafa ve ianao?
Ny vidiny mahazatra dia 1,99 euro, kanefa izao dia azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Blox 3D Mpamorona izao tontolo izao
Ity lalao ity dia mamela ny ankizy, ary koa ny olon-dehibe, manangana tontolo noforonina tanteraka avy amin'ny 3D blocks mandrisika ny famoronana sy ny fisainany.
Blox 3D Mpamorona izao tontolo izao€ 3,49
Blox 3D City Mpamorona dia karazany hafa amin'ny lalao teo aloha izay mamela mamorona 'tanàna mahatalanjona miaraka amin'ny tranobe, fiara, arabe ary olona. Azonao atao ny manampy tranobe, arabe, arabe, karazana fiara rehetra toy ny fiara, kamio, hetsika ary manome fiainana ny tanànanao.
Toa androany no andro manerantany 3D satria ity misy fampiharana hafa miaraka amin'ity fomba ity izay afaka mahita maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra isika.
Anim8 mamela ny vao manomboka sy ny amateurs mamorona sary mihetsika 3D amin'ny fomba mahafinaritra sy intuitive.
Avy amin'ilay mpamorona ny Blox 3D, Blox 3D World Creator ary Blox 3D City Creator, Blox 3D Junior «Fomba mahafinaritra sy mora asaivo manangana zavatra amin'ny 3D ny ankizy. » Izy ireo dia afaka mamorona zavatra tsara tarehy amin'ny fomba tsotra sy intuitive, amin'ny fikasihana iray monja, na fikasihana roa hamafana, manampy sticker, ary maro hafa.
Blox 3D Junior€ 4,49
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao sy fampiharana 8 maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra (26 Desambra)
Adrian nava dia hoy izy:
Tsy maimaim-poana i Republique
Valiny tamin'i Adrian Nava
Republique, ny lalao feno dia tsy maimaim-poana, ny toko voalohany ihany
Julio Urízar dia hoy izy:
Blox 3D Tsy maimaim-poana koa io, fa $ 2.99 ny vidiny
Valiny tamin'i Julio Urízar
Ny lohatenin'ny lahatsoratra dia milaza fa "mandritra ny fotoana voafetra", ary ao amin'io lahatsoratra io ihany dia efa marihina fa tampoka ireo tolotra ireo ary tsy fantatra ny fiafaran'izy ireo. Indraindray maharitra mandritra ny andro maro izy ireo, ary indraindray indraindray ora vitsivitsy ihany. Miankina amin'ny mpamorona izany. Ny tanjoko dia ny ahazoanao manararaotra ny fihenam-bidy toa ahy, fa tokony ho haingana ianao hehe.
AirPods dia mamoaka ireo toerana malemy ao Apple